Hablaha Soomaaliyeed ee xurmada inaga mudan tilmaan ahaan, waxay ugu qurux baddan yihiin.
Saturday 21st November 2020 11:35:23 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
marka ay xishood dartii farta dhexe la qaniinayaan, Ee ay dhabanka si dadab ah u sii jeediyaan, iyo marka ay sida kalsoonida leh u sheekeynayaan ee ay farxadda la dhoolla caddeynayaan.
Eeg hadda, Hablaha soomaaliyeed filsamida ka muuqata marka ay sitaan dharka hiddaha iyo dhaqanka, siiba Boqorka iyo Dhaclaha, Cunnaabida, Kuusha iyo Makowga, sidoo kale bal isha la sii raac marka ay xidhan yihiin ( Dharka Alindiga ah nuucyadiisa kala duwan).
Adiga oo aan ku talax tagin, indhaha la raac marka ay xijibaan yihiin ee ay ku hor marayaan quruxda ka muuqata, Bal hoos u sii bacleel oo il qooraansi ku eeg marka ay guriga dhex joogaan ee ay sitaan diraca nuucii ugu danbeeyay, gaar ahaan Baac weynaha, aan ku weydiiyee, ma cid ka qurux baddan baa jirta?.
Quruxda hablaha Soomaaliyeed, waxaa laga amaanay ilaa iyo hey’adda filimada sameysa ee Holy wood-ka, waxayna jariiradda ( The New star ) gabdhaha soomaaliyeed ku sheegtay ” in ay yihiin kuwa dunida ugu sarreeya dhanka quruxda iyo midabka, inkasta oo lagu soo lamaaniyay gabdhaha reer itoobiya, Haddana shirkadaha daneeya filim sameynta dalabkooda koowaad ee xilligan waa gabdhaha soomaaliyeed.
Sidoo kale, hablaha soomaaliyeed waxay horyaal ka yihiin bilicda iyo soo bandhigyadda carwooyinka dharka (Model ). Waayo gabdhaha daadihiya ee gadh wadeenka ka ah ayaaba soomaali ah, waxayna ku kasbadeen bilicda uu ilaahey siiyay Mullaaxda, Midabka Maarriin Dhalaalka ah, iyo Midabka Madow labeenta leh.
Cabdishakuur Siciid Cabdi
Geeska afrika iyo guud ahaan dalalka Africa ma uga hadli karaan xaalada Ethiopia si aanay ogolayn xukuumada abbey ahmed
"Darawalada Dowladu Waxay Tabanayaan In Wasirku Marku Yimaado Soo Qorto Darawal U Adeer U Yahay"